Ugu dambeyntii, aad ugu dambeyntii Dhumeen cod qoto dheer in madaxaaga ka dhex leh "Tallaabada Nuurka." Xilligan la joogo in, aad go'aansaday inuu ka tago ka dambeeya noloshii mugdiga iyo Gaariisa isticmaalka Android oo ay qaataan nolosha dhalaalaya, midabo iyo free of iPhone. Waxaad laga yaabaa in la jirrabay ay design hufan, waa ay fududahay in la isticmaalo iyo waxa daahirka ah user interface ama aad si fudud u doonayay in ay isku dayaan iPhone cusub in qof walba waxa uu ka hadlayaa.
Si kastaba ha ahaatee, hal dhibaato oo ah in aad dhab ahaan ugu yimid doonaa guud ahaan marka la wareegaya ka Android inay iPhone waa in kuwii hore lagu wareejiyo music in dambaysta ah. Waxaa laga yaabaa inaadan ogayn laakiin si niyad qaybsiga music sharci-darrada ah iyo burcad-badeeda, Apple waxay leedahay sharciyo aad u adag marka la koobi ka mid ah aalad si kale music. Waxaa jira dhowr siyaabood oo tan, mid ka mid ah kuwa ugu badan isagoo habka buuga Lugood kaas oo aad ka heli kartaa website-ka rasmiga ee Apple sameeyo. Si kastaba ha ahaatee, waa la ogaaday in uu yahay xalka ugu xumaa muddo dheer sida ay tahay waqti badan ayey u adag tahay oo loogu talogalay dadka ku cusub tahay waxyaabaha Apple ee.
Xalka fiican waa in la isticmaalo codsi xisbiga saddexaad si ay u qalabayn habkan. Waxaa jira badan oo halkaas in ay adag tahay in la kala saaro wanaagsan ka xun. Mid ka mid ah codsiga gaar ah ayaa ay sumcad by xad-dhaaf ah macaamiisha qanco waa Mobiletrans Wondershare. In this article, waxaan ku tilmaami doonaa qaababka ay ugu weyn oo u muujisid in aad sida loo isticmaalo si ay u Music ka Android wareejiyo iPhone.
Mid ka mid ah Click si ay u gudbiyaan Music ka Android inay iPhone
Mobiletrans Wondershare waa software kaliya ee suuqa ah in kuu ogolaanayaa inaad ka Android wareejiyo music inay iPhone hab ammaan ah oo khatar la'aan 100% ah oo dhan in kaliya click hal. Waxay bixisaa qabanin xawaaraha kala iibsiga iyo bixiyaa tiro balaadhan oo ah qaababka kale. Tusaale ahaan, waxaad awooddo si aad si fudud oo dhan xogta aad gurmad aad kombuutarka oo u celinaynaa taariikh dambe waxa ay si sahlan. Waxa kale oo uu leeyahay muuqaal file joogto ah tirtirka ka dhigaya isticmaalka US technology military si ay u hubiyaan in dhammaan faylasha in aad tirtirto waa unrecoverable, xataa hababka ugu adag kabashada xogta hadda la heli karo si dadweynaha. Tani waxay noqon kartaa caawimo ee aad u weyn marka aad rabtid in aad warbixinta gaarka loo leeyahay oo ka fog gacmaha Anonymous. Si music ka Android wareejiyo iPhone isticmaalaya Mobiletrans Wondershare, adeegso tilmaamaha soo socda:
Tallaabada 1. Hubi in aad updated labada qalabka Android iyo software aad iPhone ayaa si version ugu dambeeyay. Markaas xirmaan labada qalabka si aad u computer iyadoo la isticmaalayo oo u dhiganta fiilooyinka USB ay.
Tallaabada 2. fur Mobiletrans Wondershare oo guji "Phone in Transfer Phone." Wondershare aqoonsan doonaa labada qalabka
Tallaabada 3. On suuqa kala socda, waxaad arki doontaa laba qalabka. Hubi in aad iPhone waa Ahaado (Midigta) iyo qalab Android aad waa il (on your bidix). Haddii aanay, riix "Flip" button in hab jagada labada qalabka.
Tallaabada 4. Next, hubi "Music" sanduuq in guddi dhexe oo guji "Start Copy." Sug ilbiriqsi yar oo dhan music aad waxaa loo wareejin doonaa iPhone.
Talooyin Bonus ah ee New Music App u iPhone
macruufka 9.0 hadda la Timaadda cusub, dib loo habeeyey oo beddeshay Music App taas oo run ahaantii kala duwan ka badan siyaalaha wax music waxaan aragnay uga fogaatay tufaaxa. Waxaan leeyahay wax badan oo ka mid ah qaababka cusub oo kuwa ku jecelna music hubaal ka heli doontaa oo xiiso leh. Hadda, waxaan idin siin qaar ka mid ah talooyin si loo hubiyo in aad helayso ugu badan uga Music ah app cusub doonaa.
1. Waxaad tab
Marka aad kor u bilaabo, waxaa lagu weydiin doonaa in ay doortaan nooca music aad soo ay la socoto farshaxanka. Laga soo bilaabo halkan, Apple Music si toos ah ay abuuri doonaan music cusub ee aad u. Habkaani waa wadnaha icon ka qaabeeya dhanka bidix ee guddiga navigation ah, taas oo ah tab ay ugu hooseysa (Eeg shaashada soo kor ku xusan). In this Waayo, waxaad tab, aad talineyaa in playlists sida ay fanaaniinta, heeso ama la door ku sifayn. Pla_x_yer music waa meesha ugu hooseysa. Just ka jaftaa ku yaal oo soo celin doonaa waxa ay hadda u ciyaaro. Button ayaa wadnaha bidixda, haddii loo doortay ciyaari doona fanaaniinta la mid ah.
2. tab cusub
The New tab idin ​​siin doonaa music cusub ee ku saabsan Music Apple oo ay ku jiraan albums, kuwan raadkaygay kulul, releases dhawaan, songs sare, albums kulul, playlists iyo qaar badan. Waxa kale oo aad ka arki kartaa videos music ee Apple Music. Xagga sare waxa aad awoodi kartaa in ay doortaan qaybaha kala duwan oo ku siin doona music gaarka ah ee ku sifayn in.
Markaas, waxaan heysanaa tab Connect taas oo si fudud sida shabakad bulshada farshaxan si ay u wadaagaan news, heeso, sawiro iyo videos kuwa iyaga soo socda. Apple Music bilaabo fanaaniinta soo socda sida ay maktabadda music aad. Waxaad mar walba unfollow karo fanaaniinta iyo weliba haddii aad rabto. Si kastaba ha ahaatee, in kasta oo qof raaci karaa fanaaniinta on Connect, kaliya macaamiishu Apple Music ciyaari karo iyo badbaadin Connect ee content ama sida posts. Waxa kale oo suuragal ah in ay jawaab ka posts iyo wadaagto ku shabakadaha kale ee warbaahinta bulshada.
App waxay sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad u dhagaystaan ​​Idaacadda, oo ay ku jiraan raadiyaha Apple Music iyo dhammaan Beats cusub 1 radio. Beats 1 waa xarun raadiye oo ah 24/7 dunida oo dhan ku nool marti Deejays. Waxay leedahay muujinaya radio kala duwan maalintii oo dhan sida aad sida caadiga ah maqli lahaa idaacada a. Waxaad awoodaa inaad ka aragto ay muujinayso socda ee Beats 1 iyo mar walba sii joogo ilaa taariikhda waxa ka soo socda.
Ugu dambayn waxaan leenahay waxa aan u malaynayaa waa tan muujinta coolest la Apple Music. Waa Siri! Haa, waxaad isticmaali kartaa Siri la. Sidaas baad u odhan kartaa waxyaabaha sida "ciyaari hits sare ka 2014" oo toos ah u bilaabi doonaa ciyaaro ee hits sare on music Apple ka soo 2014. Waxa kale oo aad dhihi karaa wax la mid ah "ciyaaro heeso badan oo kale ah" hadii aad u sida waxa haatan u ciyaara iyo waxa kale oo aad xitaa saf kartaa waxyaabo, tusaale ahaan wuxuu ku yidhi "ka dib markii Ciidanka Police song play this by Eva Simons." Shaqsi ahaan, hubaal waxaan qabaa in la shaqeynayaan Siri ku music Apple, taasi waxa ay noqon doontaa adeeg ugu weyn music ee abid jiray.
> Resource > Transfer > Xalka ugu fudud si ay u gudbiyaan Music ka Android inay iPhone